Adama sy Eva - Wikipedia
I Adama sy i Eva, araka ny Bokin' ny Genesisy ao amin' ny Baiboly sy ao amin' ny Soratra Masin' ireo fivavahana abrahamika hafa, dia ireo olombelona roa voalohany noforonin' Andriamanitra teto ambonin' ny tany, izay razambe nitaranaka ny olombelona rehetra. Ny fahotan' izy mivady no niteraka ny fahasahiranana sy ny fahafatesan' ny olombelona.
I Adama sy i Eva ao amin'ny Paradisa an-tany, sary nataon'i Johann Wenzel Peter,
1 Fitantarana ao amin' ny Baiboly hebreo
1.1 Fitantarana momba ny famoronana
1.2 Ny fahalavoana sy ny fandroahana avy ao Edena
1.2.1 Ny famitahan' ny bibilava an' i Eva
1.2.2 Ny ozona nahazo an'i Adama sy Eva
1.2.3 Ny fandroahana an' i Adama sy Eva
1.3 Ny taranak' i Adama sy Eva
Fitantarana ao amin' ny Baiboly hebreoModifier
Ireo toko voalohany ao amin' ny Genesisy dia manome fedrà momba ny nidiran' ny ratsy teto amin' izao tontolo izao. Napetrak' Andriamanitra ao amin' ny saha Edena i Adama (amin'ny teny hebreo: אָדָם / ʾĀḏām) sy i Eva (amin'ny teny hebreo: חַוָּה / Ḥawwāh) izay noroahiana avy tao amin' io saha io taty aoriana. Tsy misy fanononana ny anaran' i Adama na i Eva ny boky hafa ao amin' ny Baiboly hebreo, ka toa manambara izany fa tsy dia misy ifandraisany firy amin' ny tantaran' ny Jiosy ny tantaran' izy mivady na dia mialoha ny tantaran' ny Jiosy aza.
Fitantarana momba ny famoronanaModifier
Mamorona an'i Adama i Elôhima, sary nataon' i William Blake, 1795
I Adama sy i Eva no lehilahy sy vehivavy voalohany resahina ao amin' ny Baiboly. Ny anaran' i Adama (אָדָם) dia miseho voalohany ao amin' ny Genesisy 1 nefa izany anarana izany dia manana hevitra mahafao-be ("olombelona"); avy eo ao amin'ny Genesisy 2--3 koa, izay vao ialohavan' ny mpanoritra amin' ny teny hebreo hoe ha (mifanandrify amin'ny "ny" amin' ny teny malagasy) izay manondro ny "lehilahy". Araka ireo toko ireo dia namolavola ny "lehilahy" (ha adam) avy amin' ny tany (אדמה / adamah) Andriamanitra, dia nampiditra fofonaina tao amin' ny vavorony sady nanao azy ho mpitandrina ny zavaboary rehetra. Nanamboatra ezer kenegdo ("mpanampy sahaza") ho an-dralehilahy Andriamanitra rehefa avy eo, ka izany mpanampy izany dia nalaina avy tamin' ny taolan-tehezan' i Adama. Ny teny hoe 'ti' nadika hoe "taolan-tehezana" dia kilalaon-teny someriana izay sady midika hoe "taolan-tehezana" no midika hoe "aina". Ity mpanampy ity dia nantsoina hoe ishsha ("vehivavy"), satria, araka ny lahatsoratra, noforonina avy amin'ny ish ("lehilahy"). Noraisin-dralehilahy amin-kafaliana ny mpanammpy azy, ka nanomboka tamin' izay, araka ny lahatsoratra ihany, dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy mba "hikambana" amin' ny vadiny, ka ho tonga nofo iray izy roa.
Ny fahalavoana sy ny fandroahana avy ao EdenaModifier
Ny lehilahy sy ny vehivavy voalohany dia nonina tao amin'ny saha izay atao hoe Edena. Tsy mihinana afa-tsy zavamaniry ny zavaboary tao sady tsy nisy ny herisetra. Navelan' Andriamanitra malalaka hihinana ny voan' ny hazo rehetra izy ireo, afa-tsy ny voan' ny hazo iray, dia ny an' ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy.
Ny famitahan' ny bibilava an' i EvaModifier
Ny fahotan' i Adama sy Eva, sary nataon' i Jan Brueghel sy Paul Rubens, 1615
Ny fitantarana ny amin' ny fandroahana avy ao Edena dia manomboka amin' ny resaka nifanaovan' ny vehivavy amin' ny bibilava, izay asehon' ny Genesisy 3.1 ho biby fetsy kokoa noho ny biby rehetra noforonin' Andriamanitra, na dia tsy milaza aza ny Genesisy fa i Satana ihany io bibilava io.
Niresaka tamin' ilay bibilava ny vehivavy sady namerimberina taminy ny fandraràn' Andriamanitra ny fihinanana ny voan' ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy (Genesisy 2.17). Voataon' ny bibilava hanaraka ny tsy fanoavany ny didin' Andriamanitra ilay vehivavy nandritra ny resak' izy roa. Nanome toky an-dravehivavy ny bibilava fa tsy hamela azy ho faty Andriamanitra raha mihinana ny voan' ilay hazo izy, ary raha mihinana an' izany izy dia "hisokatra ny masony" sady "ho sahala amin' Andriamanitra hahalala ny tsara sy ny ratsy" (Genesisy 3.5). Hitan-dravehivavy fa mahafiaritra ny maso ny voan' ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sady tsara koa ny hahazoana fahendrena amin' ny fihinanana ilay voankazo.
Nohanin-dravehivavy ilay voankazo ary nomeny koa ny vadiny (Genesisy 3.6). Tamin' izany no nahalalan'izy ireo ny fitanjahany, ka nanamboatra salaka tamin' ny ravin' aviavy izy ireo (Genesisy 3.7).
Ny ozona nahazo an'i Adama sy EvaModifier
Mitsara an'i Adama Andriamanitra, sary nataon' i William Blake, 1795,
Nanontany an-dralehilahy sy an-dravehivavy Andriamanitra (Genesisy 3.8-13), nanomboka ny resaka Andriamanitra ka nitarika ny lehilahy amin' ny sarim-panontaniana natao hiheverany ny zava-dratsy nataony. Nanazava ny lehilahy fa niafina izy noho ny fahatsapany ny fitanjahany (Genesisy 3.10). Sarim-panontaniana roa no nanaraka an' izany, izay natao mba hanehoana ny fahatsiarovan-tenan' izy ireo tamin' ny fihantsiana ny didin' Andriamanitra. Nanondro ny vehivavy ho tena tompon-kadisoana ny lehilahy, ka midika izany valin-teny izany fa tompon' andraikitra amin' ny zava-mitranga Andriamanitra satria Andriamanitra no nanome azy vehivavy (Genesisy 3.12). Nanasa ny vehivavy haome valin-teny Andriamanitra ka ny bibilava no nolazain' ny vehivavy fa tena tompon' ny fahadisoana (Genesisy 3.13).
Niantefa tamin' izy telo, izay samy meloka, ny fanononan' Andriamanitra ny fanamelohana telo loha (Genesisy 3.14-19). Ozona mahery no azon' ny bibilava tamin' Andriamanitra: ny bibilava handeha amin' ny kibony sady hiaritra ny herisetran' ny taranaky ny lehilahy sy ny vehivavy. Sazy mahakasika ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fiainana no azon' ny vehivavy: hahatsapa mangirifiry izy mandritra ny fiterahany ary amin' ny fanatanterahana ny faniriany dia hanjaka aminy ny vadiny. Ny sazin' ny lahilahy dia ny ozona mahazo ny tany izay niaviany: hiasa mafy ny lehilahy, ary nahazo filazam-pahafatesana ny lehilahy, na dia tsy voalazan' ny lahatsoratra aza ny tsy feteza-matin'ny olombelona. Tampoka koa, ao amin' ny lahatsoratra, ao amin' ny Genesisy 3.20, ny lehilahy dia nanome narana ny vadiny hoe "Eva" (teny hebreo: חַוָּה / Hawwah), "satria izy no renin' ny velona rehetra". Nanamboaran' Andriamanitra fitafiana tamin' ny hoditra i Adama sy Eva (Genesisy 3.20).
Ny fandroahana an' i Adama sy EvaModifier
Ny fitantarana momba ny saha Edena dia mifarana amin' ny teny irerin' Andriamanitra, izay nandraikitra ny fandroahana an' izy mivady sy ny fanatanterahana an' izany (Genesisy 3.22-24). Ny anton' ny fandroahana dia ny mba hisakanana ny olona tsy hihinana ny voan' ny hazon' aina ka hahatonga ny mpihinana ho tsy mety maty (Genesisy 3.22). Nataon' Andriamanitra sesitany avy tao amin' ny saha Edena i Adama sy i Eva sady napetrak' Andriamanitra ny Kerobima sy ny "lelafon' ny sabatra mihebiheby" (izany hoe lalafon'ny sabatra tsy mitsaha-mihodinkodina) mba hiambina ny saha (Genesisy 3.24).
Ny taranak' i Adama sy EvaModifier
Nitondra an'i Abela hovonoiny i Kaina, nataon'i James Tissot
Ny Genesisy 4 dia mitantara ny fiainana any ivelan' ny saha Edena, ka isan' izany ny fahaterahan' ireo zanak' i Adama sy Eva voalohany, dia i Kaina sy i Abela, isan' izany koa ny tantaran' ny vonoana olona voalohany. Niteraka ny zanakalahy fahatelo (i Seta) koa izy mivady ary mbola niteraka "zazalahy sy zazavavy hafa" (Genesisy 5.4). Ny Genesisy 5 dia mitanisa ny taranak' i Adama sy Eva hatramin' i Seta ka hatramin' i Noa (na Noe) sady manome ny taonan' izy ireo amin' ny fotoana ahaterahan' ny zanakalahy voalohany sy ny taonan' izy ireo amin' ny fahafatesany. 930 taona i Adama tamin'ny nahafatesany.
Araka ny Bokin'ny Jobily dia nanambady ny anabaviny atao hoe Avàna (Awân), zanak'i Adama sy i Eva ihany, i Kaina. Araka io boky io ihany dia nteraka an' i Azora (Azûrâ) vadin' i Seta koa izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Adama_sy_Eva&oldid=997830"
Dernière modification le 9 Oktobra 2020, à 11:55
Voaova farany tamin'ny 9 Oktobra 2020 amin'ny 11:55 ity pejy ity.